‘Ukondla izinkomo kuphundla iphakethe lethu ngaleCOVID-19’ – Sivubela intuthuko Newspaper
LONA ngumhlambi wabantu basemakhaya osuke uzodayiswa ezindalini zakwa-AAMKZN. ISITHOMBE NGU: TSEPO MOLEFE
BAKHALA ngokuphundleka kwephakethe abafuyi baKwaZulu-Natal abadonsa kanzima ngokuhweba ngemfuyo njengoba kumele bondle imihlambi yabo kulandela ukuhamba ngonyawo lonwabu kwezinkomo zabo ezindalini ngenxa yokumiswa kweminye imicimbi emikhulu okuhlatshwa kuyona izinkomo okubangwe ngukubheduka kweCOVID-19.
UMnu Bhekizwe Mhlongo ongumlimi ofufusayo eGreytown uthi kuyezwela kuyena kulezi nsuku njengoba kusebusika engakwazi nokuyohweba ngemfuyo endalini. “Sishayeke kakhulu ngaleCOVID-19 njengoba singakwazi ukudayisa izinkomo zethu. Ukumiswa kwemicimbi emakhaya kusithikamezile ngoba ngemfuyo yethu siyakwazi ukucosha ubuchwabalala ukuxosha ikati eziko. Sibhekene nomthwalo wokuhlale sithenga amabhele ukuze sikwazi ukondla izinkomo zethu zihlale zizinhle,” usho kanje.
UMnu Ralph “Jamludi” Aadnesgaad ongomunye wabaqondisi bezindali zakwa-Aadnesgaard And Melouney KwaZulu-Natal (AAMKZN) uzwelane kakhulu nabalimi ngalesi sikhathi sokuvalwa kwezwe njengoba imboni yabo yokuhweba ngemfuyo ithikamezekile nayo. “Siyaqhubeka nezindali zethu kodwa isimo sinzima kakhulu nabafuyi badonsa kanzima njengoba kumele bondle imfuyo yabo. Njengoba kusebusika imfuyo iyashayeka ngenxa yamakhaza. Ukumiswa kwezwe kuthikameze kakhulu ngoba abalimi basuke bethembele ezindalini zethu ukuthi bazohweba kahle kuzona. Kulezi nsuku kunzima ngoba izinkomo ezithengwayo endalini kuba yilezo okusuke kudingeka inyama yazo ezilaheni kuphela. Phambilini bekushesha ngoba abantu bebefika endalini bezobheka izinkomo kungaba ngamajongosi namathole okulobola, ezokwenza imicimbi ehlukahlukene nezizohlatshwa emingcwabeni,” kusho uJamludi.
UMnu Thubelihle Zondi onguNobhala we-African Farmers Association in South Africa (AFASA) KwaZulu-Natal uthe kukhona ukudla okusizayo emfuyweni ukuze ihlale yondlekile kungaba sebusika nasehlobo imbala. “Ebusika imfuyo iyakhahlamezeka njengoba utshani busuke bungondlekile kahle ngakho kuhle ukuthi abalimi bathenge amabhele nosawoti lo oyitshe okhothwa yimfuyo. Okunye okusizayo ngukuthi abafuyi kumele bakujwayele ukugoma imfuyo ukuze ikwazi ukumelana namakhaza asebusika,” usho kanje.
Isithembu inkambiso yakwaZulu; hhayi ekaShembe’